Malunga nathi -Shijiazhuang Tidy Fashion Trading Co., Ltd.
Impahla yemvula-yengubo yemvula ye-PVC
Imvula-PU idyasi yemvula
Imvula-uEva Peva Idyasi yemvula
Imvula-Pvc / Ipholiyesta enemvula
I-Shijiazhuang Tidy yokuThengisa iMfashini Co., Ltd.yasekwa ngo-2011. Umnini unamava orhwebo lwangaphandle kwiminyaka engaphezulu kwamashumi amabini kunye neziko lethu lokuvelisa, ngoku senza imveliso kunye nokufumana iimveliso ezahlukeneyo zokuthumela ngaphandle kubathengi kwihlabathi liphela. Iimarike zethu eziphambili ziquka iYurophu, uMntla noMzantsi Melika, iAfrika neAsia.
Okwangoku, izinto zethu eziphambili zibandakanya iimpahla zokusebenza, imvula, iimveliso zangaphandle, iimveliso zekhaya, iimveliso zokwazisa kunye nezinto zeplastiki. Sinikezela ngezi mveliso kukhetho olubanzi lobungakanani, amabakala, imibala kunye nezitayile. Uqinisekile ukuba uza kukwazi ukufumana into eya kulungela iimfuno zakho. Ngapha koko, siluthatha nzulu ulawulo lomgangatho. Ukujonga iimveliso kuwo wonke umjikelo wokuvelisa, siyakuqinisekisa ukuba sikunika kuphela izinto ezisemgangathweni ophezulu.
Njengoko inkampani yethu isanda kwiimarike ezininzi sifuna amaqabane amatsha orhwebo. Nceda unxibelelane nathi ngoku ngembalelwano eneenkcukacha. Nayiphi na imibuzo iya kuthakazelelwa.
I-Shijiazhuang Tidy Fashion Co, Ltd. sisinxibo semvula esinobungcali kunye nempahla yokusebenza yokuthengisa ngaphandle. Ifunyanwa emantla e-china, kufutshane nase-Beijing. Singabantu abakhokelayo abavelisa emantla e-China kuzo zonke iintlobo zeRaywear, Outwear, Baby item kunye nezinye izinto zeplastiki
Sinemveliso yethu yeplastiki kwisixeko sethu. Ukuqesha abasebenzi abangaphezu kwama-200, abangama-30 kwaba basebenzi banoxanduva lolawulo lobuchule (td), ulawulo lomgangatho (qc) kunye neenkqubo zolawulo. Ngelixa amalungu e-TD onke ene-20years ubuncinci yamava afanelekileyo, abasebenzi be-QC bakwanazo iingcali kulungiselelo lwemveliso kunye nokucwangciswa kokuhanjiswa kweodolo. asikhange siqokelele amava orhwebo atyebileyo aphesheya, kodwa siphumelele igama labathengi ngesimo sethu sengqondo malunga nomsebenzi.
Iimveliso zethu zigubungela: I-PVC, i-PEVA, i-EVA, i-PE, i-Pvc / iPolyester / i-PVC, i-100% yenayiloni yemvula, i-Nylon (iTaffeta / i-Oxford / iRipstop), i-100% yePolyester (iTaffeta / iMicro / iTwill), i-100% yeCotton, i-T / C yokunxiba, iqokobhe elithambileyo iibhatyi, njl. sinenzuzo epheleleyo kwixabiso, umgangatho, kunye nexesha lokuhambisa. Olu lulungelo lwethu olukhethekileyo nolukhulu.
Inombolo ye-151 yeZhongshan yasentshona, iShijiazhuang, China